အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: 11/15/07
မနေ့ညက ကျွန်တော် အိပ်မက်တစ်ခု မက်ပါတယ်။ အဲဒီအိပ်မက်က ဘယ်လိုလဲဆိုတော့.......
အဲဒီ့အိပ်မက်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ချစ်သူနှစ်ယောက် Cow Boy ၀တ်စုံကို သေသေချာချာ ကျကျနန ၀တ်ပြီး သေနတ်ခြင်းယှဉ် ပစ်ကျပါတယ်။ နေရာကတော့ ဆူးလေစေတီနားက လမ်းလယ်ခေါင်မှာပါ။ သူတို့နှစ် ယောက် အခုလိုသေနတ်ခြင်း ယှဉ်ပစ်ဖို့အထိဖြစ်လာတာ အဓိကတရားခံက ကျွန်တော်ပါ။
ပထမချစ်သူ : နင်ရှိလို့ မဖြစ်ဘူး နင်ကငါတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အဓိကရန်သူဘဲ..။ နင့်ကြောင့် ငါတို့နှစ်
ယောက် စိတ်ဆင်းရဲရတယ်...။ ဒီတော့ ဒီနေ့ငါ နင့်ကို အပြတ်ရှင်းမှဖြစ်မယ်...။
ဒုတိယချစ်သူ : ဟုတ်တယ်...။ ငါ့အတွက်လည်းနင်ရှိနေလို့ မဖြစ်ဘူး.. နင့်ကြောင့်ငါတို့ အရမ်းခံစားခဲ့ရ
တယ်။ ငါလည်းနင့်ကို အရှင်မထားဘူး...။
ဟိုက်ပြသနာဘဲ...။ သူတို့ပုံစံတွေက တယယ်လုပ်ကျတော့မယ်ပုံတွေပါ....။
ပထမချစ်သူ : ကဲပြောနေတာကြာတယ် စလိုက်ရအောင် (၁) ကနေ (၃) အထိရေမယ်..okay လား ?
ဒုတိယချစ်သူ : လုပ်လိုက်လေကြာသလားလို့။
ပြိုင်ပွဲစပါပြီ...။ ၁....၂.....၃..... "ဒိုင်း........."။ သေနတ်ကနှစ်လက်ပါ ဒါပေမယ့်ပြိုင်တူ ပစ် လိုက်ကျတာမို့ အသံက တစ်သံတည်း ထွက်သွားပါတယ်.....။ ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတာ တစ်ခုက သူတို့နှစ် ယောက်မှာ တစ်ယောက်မှ ထိသွားခြင်း မရှိတာပါဘဲ (လွဲသွားကျလို့ မဟုတ်ပါဘူး သူတို့နှစ်ယောက်က တ ကယ်ကို လက်ဖြောင့် နာမည်ကြီးတွေပါ။ အထူးသဖြင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံကို ချိန်ပြီး ပစ်တဲ့ နေရာမှာ တကယ့်ကို ဆရာတွေပါ)။
ပထမချစ်သူ + ဒုတိယချစ်သူ : ကဲအခုတော့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ? ငါတို့နှစ်ယောက်ကို ဒီလောက်စိတ်ဆင်း
အင်?? သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး မသေဘူး..ဒါဆိုရှောသွားတာဘယ်သူလဲ?? အဲဒီ့အခါကျမှ ကျွန်တော်လဲ အလောင်းကို သေသေချာချာကြည့်လိုက်မိပါတယ်။
"ဟိုက် ! ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်???" သွေးအိုင်ထဲတွင် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြင့် အသက်ထွက် သွားသူမှာ "ကျွန်တော်" ဖြစ်နေလေသည်။
အမှန်မှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်သည် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်သတ်ရန် သေနတ်ယှဉ် ပစ်ကျခြင်း မဟုတ်ပါဘူး...သူတို့နှစ်ယောက်ကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် စိတ်ညစ်အောင် အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ အကြိမ်ကြိမ် နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံက နှစ်လုံးသားကို ဘယ်သူက အရင်ထိအောင် ပစ်နိုင်မလဲ ဆိုပြီးတော့ ယှဉ်ပစ်ကျခြင်းသာ ဖြစ်ပါတော့သည်။
Appendix : ကျွန်တော်လည်း အိပ်ယာမှ လန့်နိုးလာပြီး အမှတ်တမဲ့ ကျွန်တော့ဘယ်ဘက်ရင်အုံကိုစမ်း
ကြည့်လိုက်ရာ တကယ်ပင် ကျွန်တော့ ရင်ခုန်သံ သေဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထူးဆန်းစွာတွေ့ရှိလိုက်ရလေ သည်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 9:20 PM3comments:
မင်းဖွင့်ခဲ့တဲ့ အချစ်, စစ်မျက်နှာပြင်မှာ
ငါ့ရဲ့ "သည်းခံမှု" နဲ့ "မာန" တပ်သားတွေ
ပြည်နှင်ဒဏ်သာ ပေးလိုက်ပါ ချစ်သူ....။
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:19 AM2comments:
ငါ့မျက်နှာကို တံတွေးနဲ့ ထွေးကြပါ....။
ငါ့ကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မလိမ်ပါနဲ့.....။
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:09 AM No comments: